कसरी बुझ्ने युवतीको ‘से क्स’ अपिल ? – Jagaran Nepal
कसरी बुझ्ने युवतीको ‘से क्स’ अपिल ?
साँच्चैभन्दा युवतीहरूको से- क्स अपिल बुझ्न निकै गाह्रो छ।तर युवतीको से -क्स अपिल थाहा पाउनु धेरै फाइदा पुग्छ किनभने जुन केटी आफूलाई अति राम्री सम्झिन्छे, त्यसलाई एक नजर लगाइदियो भने उसको घ-मण्ड बढ्छ। त्यस्ती युवतीलाई छड्के आँखा पारेर खुट्टामा हेरिदियो भने ऊ स्वतः लज्जित हुन्छे।
खुट्टामा हेरेर प्याच्च थु-किदिनुभयो भने केही पर पुगेर आफ्नो जि-उडाल फर्की–फर्की हेर्न थाल्छे। र, नजिकमा घर वा कोठा भए फर्केर गई ऐना हेर्छे। यो पुरुषहरूको स-म्मोहन शक्तिको गुण हो।
जतिसुकै व्यस्त आईमाई भए पनि घरबाट बाहिर निस्कँदा घडी अर्थात् समयलाई महत्व दिँदैनन्, ऐना हेर्छन् ।
यहीलाई फ्लो गरियो भने केटीहरू आकर्षिक हुनेमा द्विविधा छैन। किनभने जतिसुकै व्यस्त आईमाई भए पनि घरबाट बाहिर निस्कँदा घडी अर्थात् समयलाई महत्व दिँदैनन्, ऐना हेर्छन् ।
ऐना नहुनेले मुख पुछपाछ गरी क-म्मर मर्काइ-मर्काई आफ्नो शरीर हेर्न थाल्छन् । त्यस्तै लोग्नेमान्छेको आँखाबाट आफू मो-हित भएको कुनै पनि युवतीलाई थाहा हुँदैन। यदि कुनै युवती र तपाईं दुईजनामात्रै एउटा बन्द कोठामा हुनुहुन्छ। युवती एउटा खुट्टा अर्कोमा चढाएर वा उपरखुट्टी लगाएर बसेकी छे भने तपाईंले यौ न प्रस्ताव राख्नुहुँदैन ।
एक अध्ययनका अनुसार राख्नुभयो भने तपाईंको गा-लामा थ-प्पड वा च-प्पल पर्ने बताइएको छ। तर खुट्टा फा-रेर बसेकी छे। देब्रे या दाहिनेमध्ये कुनै एक हल्लाउँछे भने समागमको प्रस्ताव राख्नुभयो भने फरक नपर्ने अध्ययनकर्ताहरूको दाबी छ। एजेन्सीको सहयोगमा